1.what na inzuzo mveliso?
Ikhaya CNC uqhoqhoqho lathes oluzenzekelayo New (CNC uzama) uqwalaselo iinkcukacha ngaphezulu injini kunye yolunye batshintshana uyilo Isikhokelo ngaphakathi, ngaba womelele nokuxhasa iindawo zokunqula, ukuphucula lokuqhubeka ngqongqo, ukuqinisekisa ukuchaneka machining uphinde ngqo; Esi sixhobo Umatshini kufakwa izixhobo ekupheleni ngamandla ezinqamlezayo kunye umva.
Izixhobo umatshini olunjalo kufuneka ube mpawu ziphambili zilandelayo:
1. uSomandla ukukwazi yinkanyamba yokugaya; kuba Screw ithambo, ujije, impethu le, ujije uhlobo iindawo, oko eziyimfuneko ukuze sikwazi ukusiphumeza eliphezulu-ngqo ezijikeleze groove, kwaye uburhabaxa phezu iimfuno spiral emseleni ukufikelela ra0.8mm.
Imfuneko isixhobo umatshini indlela motion, ukuchaneka aphezulu kunye nozinzo enamandla elungileyo umsonto SX325 CNC ukwenze konke inxalenye osisi enefuthe ngayo le ufake isixhobo yokugaya ovuthuzayo, isixhobo ezinqamlezayo eguquguqukayo ngokusebenzisa ukujikeleza cutterhead drive ingxubevange nzima mgawuli ophezulu-speed (main), umashini isixhobo othini drive bhokisi ujikelezo kade (abancedisayo), uZ1 shaft njengako workpiece pitch okanye enokukhokelela ecaleni workpiece axis intshukumo (intshukumo feed), i (intshukumo yokusika) ovuthuzayo wekhaya X1 eshukumayo kahle eliphezulu machining ngqo eliphezulu emseleni helical.
2. Ukuba ngqongqo High imoto nokugaya umthamo processing edityanisiweyo:
Igrafu enye izicelo kunxibelelwano, izixhobo zombane zasekhaya, elektroniki, izinto zokudlala kunye namanye amashishini kwemigaqo ubudeki enkulu amacandelwana kunye namasebe, inkqubo entsonkothileyo, ukuchaneka phezulu, ifuna machining entsonkothileyo izithuthi, yokugaya kunye ekujikeni, SX325 CNC hamba zonke iimoto enamandla, umama, unako ukusebenza ngokobungakanani. Indlela processing yemveli ukusebenzisa lathe wokwamanani ulawulo okanye umshini wokugaya, umatshini zokomba, izixhobo umatshini iziko machining, ukusebenza processing inkqubo igqityiwe, izixhobo ubungakanani kwemfuneko, ngobuchule yemveliso iphantsi, loo ngendlela machining kwamalungu workpiece emva kokuba nokubotshwa yesibini kukuba nzima ukuqinisekisa.
Igrafu mnye: unxibelelwano, nendlu izixhobo, elektroniki, kushishino zokudlala iindawo ezithile (32 mm ubukhulu ngowe-20 ukuya Ф Ф)
SX325 Wabaguqukela, umama, CNC uye bonke babe ngqongqo aphakamileyo ngexesha elinye nokubotshwa onokufikelela ukuqina eliphezulu imoto workpiece zezindlu, endface, ngentambo, ukusika groove, ndinqumle kunye nokugaya tyaba, ukubhola, u- kunye nesiphelo ubuso ndiyinqumle emva kokuphela sangasemva zokomba, uthinte, umthamo processing edityanisiweyo ekruqulayo kunye nezinye.
3. Ukwenziwa amandla ngqo iindawo shaft neyi:
Isazobe. 2 a ngendlela eliphezulu nesibili neyi ngesanti kubunzulu baphantsi, izahlulo auto, zonyango, eyama aerospace kunye namashishini ezamehlo.
Umfanekiso 2: ngesanti kubunzulu baphantsi, iindawo auto, zonyango, eyama aerospace, iinxalenye ezithile kushishino enombala kaThixo (32 mm ubukhulu ngowe-20 ukuya Ф Ф)
Kunzima kakhulu ukwenza iindawo shaft esincinane ratio elide / ubukhulu phezu 6, kunye nocoselelo kuxhome kunzima ukuqinisekisa. CNC uqhoqhoqho lathes oluzenzekelayo New nk (CNC ukuhamba yonke) kuba ubuchwepheshe processing ezizodwa ezifana-high speed guide yolunye ethetha ngetyholo, workpiece kunye namalungu isixhobo yokusika usoloko ixhaswa isikhokelo ngaphakathi, ukuze kube lula hlulwa ubukhulu ukususela 5 ~ 32 mm, ubude ngaphakathi 280 mm ngomzimba ultra iindawo shaft.
2) yomtya ingxelo ngesantya / indawo isebenzisa izinto ezintsha ezifana inkjet eyakhelwe-ngaphakathi nothango okanye owahluke ngokwemvelo, eye ulawulo ephakamileyo ikwazi rotary kunye nengxelo.
3) kwimeko yesakhiwo yokusonta kabini, gcwalisa ulandelelwano processing ligqitywa ngexesha elinye, ukunciphisa ukusebenza ngqo le workpiece ngenxa nokubotshwa zasesekondari, nokuphucula ukusebenza machining.
Ngaphezulu kwe-4) ulawulo multi-ezimanyeneyo multi-axis nedibanisa nobuchwepheshe ukukhuthaza isakhono amalungu yesixhobo umatshini lemveliso nzima kunye nokusebenza machining, umatshini ulawulo isixhobo bemayini axis ezisixhenxe, inani izixhobo amandla kunye nezixhobo namandla ndawonye engaphezu kwama-20 .
5) zizityebi esizisebenzelayo uqwalaselo, bayiqonde kwaye bafikelele kwinjongo yolawulo umntu omnye umsebenzi umatshini eninzi, ukongeza yokuthutha bar yemveli, isixhobo ukususwa chip yayo, ezifana elide / elifutshane workpiece izinto workpiece receiver, isixhobo ngokuzenzekelayo imela, okrelekrele ukuchonga, workpiece kuhlolwa popup oluzenzekelayo kunye nenkqubo yovavanyo lwesixhobo breakage abaye baphumelela isicelo imveliso leyo, bafumanise kuphakamisa umgangatho kwinqanaba esizisebenzelayo isixhobo umatshini kunye nezixhobo esweni.
2.how malunga Pre yokuthengisa inkxaso?
Pre intengiso inkxaso
1, ngaphandle kwentlawulo ukunika izisombululo yobugcisa kubathengi. Ukubonelela abathengi kunye sicwangciso best processing, kuquka ukhetho isixhobo umatshini kunye uqwalaselo, iteknoloji olululo, ukhetho isixhobo, ukusika parameters, izahlulo iiyure, ukhetho chuck kunye nezinye iinkonzo zomsebenzi.
2, yonke inkqubo umkhondo, ekuphenduleni iingxaki ezifunyanwa abathengi kwi nokusetyenziswa kwezixhobo, ukubonelela uluhlu olupheleleyo lweenkonzo zobugcisa kunye nenkxaso kubathengi.
3, ngaphandle kwentlawulo abashishini umxumi ukunika uqeqesho. Imixholo zoqeqesho ziquka ukusebenza umatshini isixhobo, kweenkqubo, ulondolozo kunye njalo, ukwenzela ukuqinisekisa ukusetyenziswa abanezakhono kwezixhobo machine.
4, ukunika ufakelo umatshini simahla futhi emthuma ukuba umthengi, ngenxa iinjineli ezintsha Ankai Corporation kuthutho abathengi ezinyuliweyo ndawo, ngokungqinelana iinkcukacha ezintsha ukwamkelwa imveliso ukwenzela ufakelo komnyango Ankai ukuba abathengi ukubonelela on-site ufakelo kwaye umatshini uvavanyo msebenzi, ukuqinisekisa ukuba abathengi uthenga le mveliso nelokungasetyenziswa ngokuthe ngqo, kunye olupheleleyo inkonzo isiqinisekiso lokuhlolwa umatshini.
3.how ngenkonzo emva-kwentengiso?
> Nika iinketho imodeli lathe ukuba abathengi kunye nokwaziswa malunga neempawu kunye iingenelo model zonke. Ncoma imodeli kwakufaneleke ukuba umxumi yesicwangciso kakhulu iindleko-efanelekileyo.
> Nika uhlalutyo ezixhobo yobungcali, ukusombulula iingxaki apho abathengi obufunyenwe imveliso, makhe abathengi Ungakhathazeki-free.When kuyimfuneko Siza kunceda abantu ukuba ukugqiba iisampulu xa kuyimfuneko.
Siya kunika ufakelo ezamahala, inkonzo uqeqesho emva kusithenga kubathengi ukuze ukulawula umatshini kwaye ufake kwi kwimveliso ngokukhawuleza.
Phambi weenjineli zethu ufika inkampani yakho iinkonzo nokufakwa ekucokiseni, nceda uzilungiselele amalungiselelo ilandelayo, ukuze iinjineli zethu ungafumana ngokutyibilikayo nangendlela efanelekileyo emsebenzini emva kokuba efikile.
1. Lungisa ontlantlu-ntathu unikezelo 380V amandla ucingo emhlabeni, aze abakhokelele kwisikhundla ecaleni isixhobo lomatshini mayixhonywe ngokusebenzisa ucingo 2.5mm2, ukuze iinjineli zethu Unakho ukuqhagamshela ukuba isixhobo umatshini emva kokuba efikile, ukunika amandla isixhobo machine.
2. Lungiselela 0.5mpa womoya kuyimfuneko ukusebenza okuqhelekileyo isixhobo kumatshini, qhagamshela kwindawo ecaleni isixhobo umatshini ngombhobho lomoya φ8.
3. Lungisa ukunciphisa oyile (ezifana ross A12 oyile ukusika esulungekileyo) ezaneleyo inkqubo machining okuchaneka lathe oluzenzekelayo.
4. Lungisa isixhobo Umatshini yokuqaba amafutha (afana Ross A32).